Ndị Palestine nwere olile anya ịdepụta Hebron dị ka UNESCO World Heritage Site
Home » Njikọ Mkpakọrịta Akụkọ » Ndị Palestine nwere olile anya ịdepụta Hebron dị ka UNESCO World Heritage Site
Dịka akụkụ nke mbọ ya iji nweta nkwado mba ụwa maka steeti Palestine nweere onwe ya na West Bank, Gaza na East Jerusalem, ndị Palestine rịọrọ Organizationtù Mmụta, Sayensị na Ọdịbendị nke UN (UNESCO) nke UN iji chebe Old City of Hebron site na Israel site na na-eme ka ọ bụrụ ebe nketa ụwa Palestine. UNESCO ga-eme ntuli aka na okwu a n'izu na-abịa, na Israel, nke na-ekwusi ike na mmegharị ahụ, na-akwado ịme ntuli aka nzuzo.
Na mbido ọnwa a, Israel gbochiri otu UNESCO ịga obodo ahụ, ebe ihe ruru mmadụ narị asatọ bụ ndị Juu bi na Palestine bi na ya. N’etiti obodo ochie bụ ebe a na-eli ozu Abraham, nke ndị Palestine na-akpọ ụlọ alakụba Ibrahimi, na ndị Juu, Tomb of the Patriarchs. Hebron ke ofụri ofụri, ye akpan akpan ikpehe ido ukpono, ebịghi akan̄wana ọnọ Israel ye Palestine.
Israel na-akwagide UNESCO ka o jide ntuli aka nzuzo karia votu mmeghe nke ọdịnala, ebe o kwenyere na na ntuli aka imeghe, obodo 21 ga-eme ntuli aka maka arịrịọ Palestine. Ọ bụ ezie na UN “Palestine” amatabeghị ya dịka gọọmentị, ọ nwere ọpụrụiche pụrụ iche dịka "onye na-esiteghị na steeti na-ele anya" ma nwee ike isonyere òtù UN dị ka UNESCO.
"Palestine abụwo onye otu UNESCO kemgbe 2011 na ọ bụ ihe nkịtị maka anyị itinye UNESCO ka ọ depụta ọnọdụ anyị bara uru dị ka saịtị Palestian na saịtị World Heritage." Omar Abdallah, onye isi ngalaba United Nations na Palestine Ministry of Foreign gwara ndị Media Line.
Abdallah kọwara na nke a abụghị nke mbụ Israel na-egbochi ndị ọrụ mba ọzọ ịbanye na mpaghara Palestine.
"Israel bu n'uche igbochi ha ka ha ghara ihu mmebi iwu Israel megide ihe nketa na omenala Palestian, mana oge a bu ihe puru iche na puru iche," ka o kwuru.
Ebumnuche nke ịnakwere obodo ochie nke Hebron dị ka ebe Palestian bụ iji chebe obodo ahụ ma gosipụta uru ọ bara na ụwa.
“N’agbanyeghi otu ọ bụla si esonyere obodo ochie nke Hibrọn, ọ dị na mpaghara Palestine ma kwesiri ịdepụta ya dika o kwesiri; ọ bara uru n'ụwa niile, mmadụ niile ga-erute ya. ” Abdallah kwukwara.
N’akwukwo nke Jenesis Hebron ka edeputara dika ebe Abraham - onye guzobere monotheism na nna nna ma okpukpere chi ndi Juu ma Islam - zutara “Cave of Machpela” dika ebe olili ozu puru iche nye nwunye ya o huru n’anya.
"Hebron bụ mgbọrọgwụ nke akụkọ ihe mere eme nke ndị Juu, ọ dị mkpa inye nsọpụrụ na nkwanye ùgwù maka nne na nna nke ndị Juu ndị e liri ebe ahụ puku afọ atọ gara aga," Yishai Fleischer, ọnụ na-ekwuchitere ndị Juu Community na Hebron, gwara The Usoro Media.
Fleischer na-ahụta UNESCO dị ka onye na-emegide Israel, ma na-ekwu na ịdepụta saịtị ahụ dị ka Palestine dị ka ibibi ihe nketa ndị Juu. N’ọnwa gara aga, UNESCO wepụtara mkpebi nke kwuru na Israel enweghị nzọrọ ọ bụla na Jerusalem - ihe wutere ndị Juu n’ụwa niile.
Fleischer kwuru na Hebron bụ obodo ndị Arab na ndị Juu jikọtara ọnụ.
“Ndị ikike Palestine gbara ebe a gburugburu, ma ebe ahụ bụkwa obodo ndị Juu n'akụkụ ya; Agaghị m akpọ obodo ochie a mpaghara Palestine, “ka o kwuru.
Ndị Palestine na-ekwu na Hebron abụwo oge dị mkpa nye ndị Alakụba.
"Kemgbe mmeghe Alakụba nye ala ndị a, a na-ahụta ụlọ alakụba Ibrahimi dị ka ebe nsọ nke anọ nye ndị Alakụba mgbe Mecca, ụlọ alakụba Al-aqsa (na Jerusalem) na ụlọ alakụba Al-Nabwi (na Medina na Saudi Arabia)", Ismael Abu Alhalaweh , Onye isi njikwa nke Hebron's Endowments gwara The Media Line.
Ndị Alakụba na-aga Hebron site na gburugburu ụwa iji kpee ekpere, o kwuru, na mmegharị Israel nọ na-etinye ikike ahụ n'ihe ize ndụ.
O kwuru, sị, "Israel ejiri ebe nyocha na ihe mgbochi gbaa obodo ochie ahụ gburugburu." "Ndị mmadụ ga-ekpe ekpere n'okpuru nlekọta nke Israel njikere nche agha, na onye ọ bụla Palestian nwere na-nche enyocha ụzọ na-aga."
Na 1994, n'oge ọnwa dị nsọ nke Ramadan - ọnwa nke ibu ọnụ iji sọpụrụ mkpughe mbụ nke Quran na Muhammad dịka nkwenkwe Alakụba si dị, otu onye Juu gbabatara gbagburu ndị Alakụba 29 na-efe ofufe n'ime ụlọ alakụba mgbe ha na-ekpe ekpere. Mgbe nke ahụ gasịrị, Israel kewara ebe dị nsọ gaa n'akụkụ abụọ - ọkara ụlọ alakụba na ọkara ụlọ nzukọ - nwere ọnụ ụzọ dị iche iche.
Emebere ndokwa ịkekọrịta saịtị ahụ na 1997 na ndị Juu na ndị Alakụba na-enweta naanị ịbanye na saịtị ahụ na ezumike okpukpe.
Gini mere ichere maka UNWTO General Assembly? Odeakwụkwọ ọhụrụ ọhụrụ etinyeworị ebe?
Iran Air A300-600 na-eme njem mberede na ọdụ ụgbọ elu Tehran